မွန်ဘိုင်းမြို့က Jawaharlal Nehru ဆိပ်ကမ်း
ကမ္ဘာတ၀ှမ်း ဆိုက်ဘာအင်တာနက် တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဒီရက်ပိုင်းကြုံနေရတာမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံက အကြီးဆုံး ကုန်တင်ဆိပ်ကမ်းတခုမှာလည်း ဒီကနေ့ တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။ အစိုးရဌာနချုပ်ရုံးတွေနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်း ကွန်ပျူတာစနစ်ကိုသုံးပြီး ငွေညှစ်တောင်းယူတဲ့ ransomware code သုံးပြီး တိုက်ခိုက်တာတွေ ခံရပါတယ်။
မွန်ဘိုင်းမြို့က Jawaharlal Nehru ဆိပ်ကမ်းမှာ ကြုံရတဲ့ ဒီဆိုက်ဘာ တိုက်ခိုက်မှုမှာ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံက သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀န်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီ A.P. Moller-Maersk က စီမံခန့်ခွဲတဲ့ ကုန်တင်ကုန်ချ ဆိပ်ကမ်းနေရာက ကွန်ပျူတာတွေလည်း ပါပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာ အင်္ဂါနေ့က ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပျံ့နှံ့ဖြစ်ခဲ့တာနဲ့အမျှ ဆိပ်ကမ်းအတော်များများမှာရှိတဲ့ သူတို့ရဲ့ ကွန်ပျူတာတွေ တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အကြောင်း A.P. Moller-Maersk က ပြောပါတယ်။
သြစတြေးလျနိုင်ငံက ကုမ္ပဏီနှစ်ခုမှာလည်း ပြန်ပေးငွေတောင်းတဲ့ ransomware ကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ တိုက်ခိုက်တာခံရပြီး ဒါဟာ အခု ကမ္ဘာတ၀ှမ်းမှာ တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့ ကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ အတူတူပဲလား ဆိုတာကို တာဝန်ရှိသူတွေက အတည်မပြုနိုင်သေးပေမဲ့လို့၊ အလားတူ ဖြစ်နိုင်ချေများတဲ့အကြောင်း သြစတြေးလျ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဝန်ကြီး Dan Tehan က သတင်းထောက်တွေကို ဒီကနေ့ ပြောပါတယ်။ ဆိုက်ဘာ တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အကြောင်း ပထမဆုံး သတင်းထွက်ခဲ့တာကတော့ ယူကရိန်းနိုင်ငံက ဘဏ်တွေ၊ အစိုးရရုံးတွေနဲ့ လေဆိပ်တွေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာတ၀ှမ်း ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကြီးတွေထဲမှာတော့ အမေရိကန် Merck ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ၊ ရုရှားက Rosneft ရေနံကုမ္ပဏီ၊ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံက A.P. Moller-Maersk သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီ၊ ဗြိတိန်က WPP ကြော်ညာ လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီ နဲ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံက Saint-Gobain စက်မှုလုပ်ငန်း အဖွဲ့တွေ ပါဝင်ပါတယ်။